लक्ष्मी खुशी पार्न यसरी गर्नुस् पुजा, हुनेछ धन’को बर्षा , – Dainiksamchar
HomeIntertainmentलक्ष्मी खुशी पार्न यसरी गर्नुस् पुजा, हुनेछ धन’को बर्षा ,
October 13, 2020 admin Intertainment 2904
हिन्दु धर्ममा लक्ष्मीलाई धनकी देवी भनिन्छ । सौभाग्य, समृद्धि, सफलता, सम्पन्नता र सुन्दरताको अर्थमा पनि लक्ष्मी शब्द प्रयुक्त हुने गर्दछ। लक्ष्मीको पुजा गरे धनी भइने जनविश्वास रहेको छ ।
यहाँ लक्ष्मीलाई खुसी पार्ने ७ तरिकाहरु प्रस्तुत गरिएको छ
:१) घरमा कुवेरको मुर्ति राख्दा लक्ष्मी खुसी हुने विश्वास गरिन्छ। खासमा कुवेर पनि धनका मालिक हुन् र उनले लक्ष्मीको रक्षा गर्छन् र कुवेरको मुर्ति राखिएको स्थान सफा हुनुपर्छ।
२) श्रीफल भनिने नरिवल चढाउँदा लक्ष्मी सबैभन्दा खुसी हुने धर्म शास्त्रमा उल्लेख छ। श्रीफलको अर्थ पनि लक्ष्मी नै हो। यो नरिवल सामान्य नरिवल भन्दा सानो हुन्छ।
३) पारोले बनाइएका जुनसुकै चित्र वा तस्विर पनि लक्ष्मीका लागि विशेष मानिन्छन्। घरमा पारोले बनेको लक्ष्मीको मुर्ति राख्नु निक्कै फलदायी मानिन्छ।
४) लक्ष्मी समुन्द्रबाट उत्पत्ती भएको मानिन्छ। मुंगा पनि समुन्द्रकै उत्पादन भएका कारण मुंगा लक्ष्मीलाई चढाउँदा धन प्राप्ती हुने विश्वास गरिन्छ।
६) श्री यन्त्रको प्रयोग पनि लक्ष्मी खुसी पार्ने अचुक उपाय हो। यसको पुजा गर्दा लक्ष्मी खुसी हुने जनविश्वास छ।७) कमलको वियों लक्ष्मीलाई चढाउँदा फलदायी हुने विश्वास छ। यसले घरमा धनको वृद्धि हुने मानिन्छ।
October 13, 2020 admin Intertainment 8102
त्यस्तो के भनेका थिए ऋतिकले ? जुन सुनेर क्याटरिनालाई राम्रो लागेन
October 8, 2020 admin Intertainment 800
एजेन्सी : प्रशंसा गर्दा मानिसले आआफ्नै तरिकाले गर्ने गर्छन्। बलिउडमा पनि कलाकारले एकअर्को अनौठो तरिकाले प्रशंसा गर्ने गरेको पाइन्छ । अभिनेता ऋतिक रोशनले पनि अभिनेत्री क्याटरिना कैफको प्रशंसा बढो अनौठो तरिकाले गरे। तर उनको प्रशंसा
October 5, 2020 admin Intertainment 626
काठमाडौँ । हरेक व्यक्ति आजभोलि पैसाको पछाडि भाग्ने गर्दछन्। यसको सबैभन्दा ठूलो कारण हो। महंगी र विलासिता। त्यसैले हरेकको चाहना हुने गर्दछ, आफ्नो साथमै धेरै धन, दौलत होओस्। तर चाहेर मात्र धन दौलत आउँदैन्। मेहनत
LEX 18 agenda conversation: Job club (117449)
digital tendencies live recently welcomed Lauren abettor (109451)
Hello world! (109013)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (107894)